गृह मन्त्रालयबाट बाढी पहिरोमा ज्यान गुमाउँनेहरुको बल्ल आयो ‘डाटा’ ! – Makalukhabar.com
गृह मन्त्रालयबाट बाढी पहिरोमा ज्यान गुमाउँनेहरुको बल्ल आयो ‘डाटा’ !
काठमाडौँ– बाढी पहिरोका कारण पछिल्लो पाँच वर्षमा एक हजार ३७ जनाको मृत्यु भएको छ । उक्त अवधिमा बाढी पहिरोका कारण ५३४ बेपत्ता र ५३४ घाइते भएका छन् ।
यो वर्ष बाढी पहिरोका कारण ४३ हजार ४०६ घर पूर्ण क्षति र एक लाख ५८ हजार १९४ घर आंशिक क्षति भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । एक लाख ४८१ जना बाढी पहिरोका कारण विस्थापित भएका छन् । रासस